Deegaano lagala wareegey Al-Shabaab - Awdinle Online
Deegaano lagala wareegey Al-Shabaab
Ciidamada Dowladda oo ay wehliyaan kuwa Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab ayaa waxaa dagaal culus uu ku dhex-maray degaanka abal oo qiyaastii 20 km dhanka waqooyi kaga beegan degmada xudur ee Xarunta gobolka bakool.
Taliyaha Ciidanka dhulka xoogga dalka jeneraal Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa sheegay in Ciidamada ay weerareen deegaanka Abal oo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab,isla markaana dileen 11 Xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Howlgalka ayaa waxaa sigaar ah u fulinayay Ciidamada Dowladda gaar ahaan Guutada 9-aad qeybta 60-aad, waxaana taliyaha uu sheegay inay Ciidamada la wareegeen deegaanka Abal iyo deegaano kale.
Dhinaca kale Al-Shabaab ayaa baraha Internet-ka ee taageera waxaa ay ku daabaceen in dagaalkii ka dhacay deegaanka Abal ay ku dileen 15 askari oo ka tirsan Ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed.
Previous articleCabdikariin X.Guuleed.“Doorashadu in lagu dhawaaqo waa muhiim ”
Next articleQaraxyo lagu qabtay Muqdisho